यस्तो छ दाजुव्दारा वहिनी वलात्कारको नालिबेली …. | ebaglung.com
२०७५ भाद्र १४, बिहीबार १४:५३	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ भदौ १४ । गत महिना पाल्पाको तिनाउँ–५, चर्चरेको जंगलमा दाजुव्दारा बहिनी बलात्कृत भएको भनिएको घटनाका पछाडी पछिल्लो चरण केहि चर्चाहरु चल्न थालेका छन । ती वलाकृत भनिएकी युवतीका नजिकका आफन्त संग बुझ्दा उनी आफु खुसी भागी विवाह गरेर गुल्मीबाटै गुल्मीको कुर्घा पुगेकी थिईन । केहि दिन पछि थाह पाएर ठुलो संख्यामा त्यहाँ पुगेका दाजु भाईहरुले जवरजस्ती छुटाएर त्यहाँबाट हिडालेका थिए ।
बिच बाटोमा आई उनका सहोदर दाजुहरुले माईती तर्फ फर्काउन खोज्दा अर्का काकाका छोरा दाजुले बुटवल उसको दिदी कहाँ लगेर केहि दिन राखौं भनेर ढिपी गरे । त्यसो भए हामी सवै जनाले लगेर बुटवल छोडौन त भने अरुले । जुन अहिले वलात्कार अभियोगमा पाल्पा जिल्ला कारागारमा पुर्वक्षका लागि थुनामा छन उनले पर्दैन, सवै जान, के जन्ती जानेहरु र ? भन्दै आफु एक्लैले मोटर साईकलमा लगेर साउन ७ गते त्यस तर्फ हिडाले ।
ती युवतीले परिवारलाई बताए अनुसार निज दाजुले पाल्पा देखि बुटवल पुग्ने बेला सम्म विचमा मदिरा सेवन गर्ने, वहिनीलाई पनि जवरजस्ती पिउन लगाउने गरे र, सडक छेउँका जंगल जंगलमा रोक्दै दुई तिन पटक वलात्कार गरे । राति करिव ११ वजेको समयमा बुटवलको दिपनगरका रहेकी उनकी दिदीकहाँ उनिहरु दुवै जना पुगे ।
ती दाजु भनाउँदा रातको २ वजे सम्म पनि पुनः वलात्कार गर्ने मनसायका साथ भित्र सुतेकी वहिनीको ढोका वाहिर उभिएर ढोका हानी रहे । राति नै पख तलाई जेल हाल्नै प¥यो भन्ने आवज वहिनीबाट आयो ।दिदी संग ती दाजुले गरेका सवै हर्कतहरु खोलिन ।
अर्को दिन पाल्पा पुगेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत ती वहिनीले दाजु विरुद्ध जवरजस्ती करणीको मुद्दा दिईन । प्रहरीले वहिनीको गोपनियता समेत खुल्ने हुँदा बलात्कार आरोपी ती पुरुषको समेत नाम र नजिकको ठेगना गोप्य राखेको छ ।
यस सम्वन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रवक्ता डिएसपी विनोद घिमिरेले निज आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएको जानकारी दिए । उनले भने–‘ हामीले नाम विवरण गोप्य राखेका छौं । ३४ बर्षिय ती पुरुषले १७ बर्षिया ती युवतीलाई चर्चरेमा वलात्कार गरेको भन्ने जाहेरीमा उल्लेख छ ।
कतै विवाहित जोडीबाट छुटाएको रिस त थिएन ?
ती आरोपी दाजु सवै संग मिलानसार ब्यक्ति हुन । राम्रो व्यवसाय गर्दथे । ती युवती काकाकी छोरी हुन । ती पुरुषको घरमा श्रीमती छोरा छोरी छन । राजनैतिककर्मी समेत हुन । उनका आफन्तजनको आरोप छ उनलाई फँसाईयो । आफुले मन पराएर गएको प्रेमीबाट छुटाईएको आक्रोष कतै यस घटनामा पोखियो कि ? भन्ने चिन्ता र चासो बोक्दै परिवारजन यति वेला अधिकारकर्मीहरु विच दौडधुपमा छन । तर युवतीका दाजुले त्यस्तो कदापी हुन नसक्ने बताउँ छन ।
उनले भने –‘उनिहरु हिडे देखि हामीले पटक पटक फोन सम्पर्क गरिरहेका थियौ । कति वेला फोन बन्द हुन्छ त कति वेला खुल्छ । फोनमा उसले बोलेका कुरा र गाउँमा उसका यस अघिका हर्कत पनि बुझ्दा हुन्छ । उनिहरुले भने जस्तो फँसाउन होईन । बहिनी पीडित भएरै हो । वहिनीको जिन्दगी विगारी दियो । पैसाको प्रलोभन पनि देखाईएको थियो । तर वहिनीको जिन्दगी भन्दा ठुलो हामीलाई पैसा होईन । कानुन अनुसार कडा सजाएँ होस् । ’